Mihalalina Ny Krizy Ao Burundi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2015 19:03 GMT
Angon-tsary tamin'ny krizy tao Burundi tamin'ny 2015
Tao anatin'ny krizy i Burundi nanomboka tamin'ny volana Aprily saingy zara raha voalaza ao anatin'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena ny zava-misy ao amin'ny firenena. Na dia izany aza, nandritra ny tapa-bolana faran'ny volana Oktobra, tonga amin'ny fetra atahoran'ny mpanara-baovao mafy mandritra ny krizy ny tahan'ny herisetra sy ny famonoana olona niniana natao.
Ho fampahatsiahivana, voafidy indray ho filoham-pirenena i Pierre Nkurunziza tamin'ny taona 2010. Mandràra ny filoham-pirenena rehetra tsy hirotsaka hofidiana fanintelony ny lalàmpanorenana ao Burundi. Tamin'ny 25 Aprily 2015, nanambara i Nkurunziza fa hirotsaka fanintelony amin'ny fifidianana filoham-pirenena Borondey amin'ny 2015. Nankatoavin'ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izany tamin'ny 5 Mey.
Nipoaka ny fihetsiketsehana manerana ny firenena hanoherana izany fanapahan-kevitra izany. Mpanao fihetsiketsehana roa amby roapolo farafahakeliny no namoy ny ainy. Nanambara ny Jeneraly Godefroid Niyombare tamin'ny 13 May 2015 fa handray ny fahefana izy raha nankany Dar-es-Salaam, Tanzania ny Filoha Nkurunziza.
Tamin'ny 14 May, tsy nahomby ny fikasan'ny mpanonganam-panjakana hifehy ny onjam-peo sy ny fahitalavi-panjakana RTNB. Nanambara ny manodidina an'i Pierre Nkurunziza fa tafaverina ao Burundi izy ary mifehy ny fitantanam-pirenena.
Nirotsaka tamin'ny fifidianana 21 Jolay 2015 i Nkurunziza ary nahazo vato 69.41% tamin'ny latsa-bato. Tsy nampilamina ny toe-draharahan'ny krizy izany fifidianana izany. Mpitsoa-ponenana an'arivony no nandao an'i Burundi namonjy an'i Tanzania noho ny tahotra ny mety hisian'ny ady mitam-piadiana.
Tao amin'ny tranonkalan'ny Feon'i Burundi, mitafatafa amin'i Aimé Magera, mpiantsehatra malaza eo amin'ny fiainana ara-politika Borondey ny mpitati-baovao Ngabire Elyse amin'izay vahaolana mety amin'ny krizy ao Burundi:
Manamarika i Aime Magera fa tsy mba nandray lesona tamin'ny lasan'ny firenentsika vao haingana ny mpitondra amin'izao fotoana izao: “Manara-dia tanteraka ny nizoran'ny teo aloha nodimbiasiny mialoha indrindra ny nidiran'ny rivotry ny demaokrasia tao anatin'ny tontolo ara-politika Borondey tamin'ny 1992 izy ireo.” Ao anatin'ny toe-javatra nandratra fo noho ireo volana maro nisian'ny fihetsiketsehana nogejaina tao anatin'ny fandahatsa-drà, fakàna an-keriny, fampijaliana, famonoana olona, fahitana vatana mangatsiaka mifatotra na nofonosina ao anaty gony sy navela manerana ny lalana na natsipy tany anaty renirano, sns, tsy hitondra zava-baovao ny komity (ny fampihavanana) voafaritry ny didy hitsivolana natsangana.
Tao amin'ny Waza Afrique, manome ny heviny momba ny krizy diavin'ny fireneny i Landry Sibomana, mpanorina ny vondrona Facebook “Asa ao Bujumbura / Jobs in Bujumbura” ao amin'ny :
Marobe ny antony: ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy, sns. Ny mampalahelo ahy, dia ireo aina nafoy, ny fananana simba, ary ny tebiteby sy ny fisalasalana amin'ny ampitso hita soritra eny amin'ny endriky ny olona. Mikatsokatso ny fiainana. Mampalahelo. Loharano lehibe ho an'ny firenena ny tanora ary tokony ho laharam-pahamehana ny fikarakarana azy ireo. Maro ny tanora tafiditra ao anaty andrakandrana mampidi-doza izay miafara amin'ny fahafatesan'izy ireo. Ary ny firenena manontolo no very amin'izany. Mino aho fa tokony hipetraka ary hifandinika sy hihevitra ny tombontsoa iombonana, dia ny filaminana sy ny fandriampahalemana ho an'ny rehetra ireo mpandray anjara. Na tiana na tsy tiana, lasibatra avokoa ny olona rehetra.
Eny tokoa, an'arivony ireo Borondey eny an-dalana handositra ny ady sy ny hazalambo miha-matetika . Manazava ny firongatry ny herisetra tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa ny lahatsary eto ambany:
Nilaza i Valentin Byabagabo, mponina ao avaratr'i Bujumbura fa nahita vatana mangatsiaka mitsingevana ao anaty renirano hatramin'ny volana Septambra.
Alohan'ny fitomboan'ny disadisa ara-poko, mampahatsiahy i Roland Rugero ao Bujumbura misy antony maro no mahatonga ny krizy:
Ao anatin'ny folo taona, ho tafakatra valo tapitrisa mahery ireo mpitady asa ao Burundi, amin'ireo mponina maherin'ny 13 tapitrisa. Tsy tokony hanadinoana ny zava-dehibe ny famahana ny krizy ataon'ireo mpandray anjara ara-politika sy ara-tsosialy, ao an-toerana na naman'ny firenena: raha mbola mahantra ny mponina Borondey, amin'ny fahamaroan'ny mponina sy ny fahateren'ny tany, dia hiaina herisetra miverimberina hatrany hatrany ny firenena. Miteraka lonilony ara-toekarena, ara-tsosialy sy politika lalina ny krizy Borondey: ireo tanora izay nandrafitra ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana dia ireo tanora tsy an'asa, ireo mpiasa tsy raikitra, ny tanora tsy an'asa any ambanivohitra mitady fanantenana ao an-tanàndehibe, mbamin'ny ankamaroan'ireo mpianatra mitsipaka ny lamina politika sy sosialy mametraka azy rehetra hogejain'ny fahantrana sy ny fananan'asa, sy ho avy tsy misy fanantenana. Miampanga ny fitondrana ho tsy mahavita mamaly ny hetaheta ara-toekarena sy ara-tsosialy izy ireo. Tsy an'ity fitondrana ity manokana izany tsy fahavitan-javatra izany.